लोक सेवा आयोगद्वारा २६६ पदका लागि आवेदन आह्वान (विज्ञापनसहित) - News 88 Post
May 29, 2022 N88LeaveaComment on लोक सेवा आयोगद्वारा २६६ पदका लागि आवेदन आह्वान (विज्ञापनसहित)
काठमाडौँ। लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्वास्थ्य सेवा अन्तरगत स्थायी पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । चौथो तह प्राविधिकतर्फ आयोगले खुला तथा समावेशीतर्फ कूल २६६ पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो ।
३०० रुपैयाँ दस्तुरसहित असार ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ । अनलाइन माध्यमबाट फारम भर्न सकिनेछ ।
हेर्नुस पूरा विज्ञापन !
कृषि मन्त्रालयद्वारा ६३ जना कर्मचारी माग (सूचनासहित)
बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एकै पटक ६३ जना कर्मचारी माग गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले करारमा नियुक्त गर्ने गरी अधिकृत र सहायक स्तरका गरी ६३ जना कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष कक्षा १२ को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । सोमबारदेखि देशभर एकैसाथ सुरु हुने परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
महानगरमा कहाँ को हुँदै छन् मेयरको उम्मेदवार ?
बल्ल पूरा भो नेपालीको रेल चढ्ने सपना
April 3, 2022 N88